Ku dhowaad boostada kasta waxay la timaadaa qaansada cuskanaya meesha ugu sarreysa halkaas oo alwaax, bir aan bir lahayn, bir, PVC lagu xiro. Waxaan ka dooran karnaa qaabka qaansada gacan -ka -qabadka sare dusha sare ama mid caalami ah si aan go'aan uga gaarno haddii gacan -ku -hayntaadu ay fadhido xagga sare ee boostada ama ay ka sarreyso.
adoo adeegsanaya xarrago leh oo casri ah ACE Glass Railing Handrail si aad u qaabeyso aragtidaada xarrago, Waxaa lagu dhisay kaliya agabyada ugu tayada sarreeya, alwaaxdeena iyo biraha gacmaheena waxay bixiyaan khadad nadiif ah iyo carqalad yar. Baalashyada, kala -goysyada, iyo agabka dhejinta ayaa si taxaddar leh loogu qaabeeyey inay xoogga saaraan quruxda kugu xeeran, ee ma aha qalabka.
Markay aragtidu hortaada furto, hubso in adiga iyo martidaada aad taageersan tihiin gacmo -gacmeedyo raaxo leh oo istaagi doona imtixaanka waqtiga.
Marka la eego agabyada, way adag tahay in la helo wax ka fiican boostada birta ah. Taasi waa sababta oo ah dhejiska birtu wuxuu leeyahay afar faa'iidooyin oo waaweyn oo agabyada kale aysan la tartami karin. Mid ka mid ah faa'iidooyinkaas ayaa ah cimri dherer, maaddaama qoraalladan bir -birta ah ay awoodi doonaan inay ka sarreeyaan oo ka sarreeyaan filashooyinka warshadaha.
Isticmaalka birta birta ah waxay siinaysaa cimri-dheeri inkasta oo aan aad u cuslayn, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon meelaha sida daaqadda oo ah meesha bir-culus ku riddo culays aad u sarreeya. Dabeecadda khafiifka ah ee birtu waxay ka dhigtay astaamo caan ku ah mashaariic dhisme oo aad u badan.
Sababta kale ee birtu u tahay maaddo caan ah ayaa ah inay leedahay faa'iidooyinkaas iyada oo aan aad qaali u ahayn. Taasi waxay ka dhigan tahay in aad yeelan karto boosteejo xayndaab bir ah oo bir ah oo aan walwal badan ku qabin in lagu iibiyo. Faa'iidada kale ee boostada birta ah ayaa ah inay u muuqato mid weyn; boostada xayndaabka birta aan birta lahayn waxay siin doontaa dhammaystir xirfadeed iyo mid sii socon doonta sanado badan.
Xirmooyinka biraha aan birta lahayn waxay ku siinayaan faa'iidooyin badan oo aysan haysan qalabka kale. Iyada oo leh biraha birta ah ee birta ah ee birta ah ma aha inaad ka welwesho qudhun, dayactirkuna wuu yaraan doonaa. Biraha birta ah ee birta aan lahayn ee birta ayaa ah ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay xayndaabka u muuqda mid aad u wanaagsan oo sii ahaan doona mid aad u wanaagsan muddo aad u dheer.
Qiimaha nidaamka taraafiga muraayadda aan dahaarka lahayn waxaa lagu go'aamin doonaa cabbirka guud ee taayirrada aad u baahan tahay, iyo sidoo kale xulashooyinka dhammaystirka ee aad doorato.
Ka dib marka la oggolaado sawirrada dukaanka, nidaamkaaga muraayadda dhalada ah ee biraha ah ayaa wax -soo -saar ka sameeya warshaddeenna Foshan, Shiinaha. Waxaan leenahay alwaax, biro, iyo tas -hiilaad samaynta dhalooyinka si aan u awoodno inaan soo saarno qayb kasta oo jaranjaradaada ah.
Ujeeddada geedi -socodkeenna been -abuurka ayaa ah in habka rakibidda loo sameeyo sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Qaybaha dhalada iyo birta ayaa loo gooyaa dhererka saxda ah ee aad u baahan tahay. Waxaan awoodnaa inaan si sax ah u saxno sababta oo ah waxaan xakameynaa hannaanka injineernimada ee nidaamka oo dhan, waxayna ka dhigaysaa habka rakibidda shaqo isku -dhafan oo fudud.
Marka nidaamkaaga tareenka la been -abuuro, waxaan ku rari doonnaa sawir -tilmaanta rakibidda oo waxaan ku bixin doonnaa tilmaanta rakibidda onlayn. Badeecadahayagu waa fududahay rakibidda DIY iyo inta badan alxanka uma baahna. Mashaariicda intooda badan waxaa lagu dhamayn karaa maalmo yar gudahood.
Hore: Muraayad Dabaasha Barkadda Dabeysha leh ee Dabaasha Spigot Glass Railing
Xiga: Nidaamka Taleefanka Birta ee Bir -La'aanta ee Balakoonka
Sileless Steel Horizontal Railing
Stainless Steel Stair Railings Gudaha